महिनावारी भएकाे बेलामा पेट दुख्ने समस्या भएका महिलाहरुका लागि प्याजले गर्छ औषधीकाे काम ! – Classic Khabar
May 16, 2021 431
महिनावारी भएकाे बेलामा पेट दुख्ने समस्या भएका महिलाहरुका लागि प्याजले गर्छ औषधीकाे काम ! काँचो प्याजको सेवनले कैयौँ समस्याको समाधान गर्छ । तपाई हाम्रो भान्समा दैनिक रुपमा उपभोग हुने प्याजले क्यान्सर देखि मधुमेह सम्मको रोगसँग लड्न मद्धत पुग्छ । चिकित्सकका अनुसार दिनहुँ प्याज खाँदा मुटुसम्बन्धी विभिन्न समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
नियमित प्याजको सेवनले शरीरमा इन्सिुलेसनको मात्रा सन्तुलित गर्छ । साथै मधुमेहरोगीले दिनहुँ प्याज सेवन गर्दा फाइदा हुन्छ । यसको नियमित सेवनले शरीरमाभएको बढि क्यालोरीलाई नियन्त्रण गर्नका साथै कार्बोहाइड्रेटलाई पचाउन सहयोग गर्छ । जानकारहरुका अनुसार रगतको कमी भएकालाई प्याजले लाभ पु- याउँछ भने प्याजले युरिन इन्फेक्सनको समस्यामा राहत दिन्छ ।
त्यस्तै तनाव कम गर्न, पाचन प्रक्रिया दुरुस्त बनाउन र मीठो निद्रा लगाउन प्याज गुणकारी मानिन्छ । प्याजमा पाइने तत्वले रगतमा चिनीको मात्रालाई नियन्त्रण गर्छ । कपाल झर्ने समस्या भएकाले प्याज खाए फाइदा गर्छ । प्याज खाँदा क-ब्जि-यतको समस्याबाट छुटकारा पाइन्छ । म-हि-नावारीमा पेट दुख्ने समस्या भोगिरहेका महिलाका लागि प्याज लाभकारी छ । आँखाका लागि पनि प्याज लाभदायक मानिन्छ ।
काेराे-ना भा- ईरस ( काे-भिड – १९ ) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ अनिबार्य रुप मा माक्स को प्रयोग गरौं साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश । हाम्राे न्युजहरु हजुरहरुलाई कस्ताे लाग्छ सल्लाह सुझाव को लागि हामिलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ।। तपाइको एक सेयरले थाहा नपाएकाले जानकारी पाउनेछन भने हामीलाई पनि सहयोग पुग्नेछ ।
Prevसार्वजनिक स्थलमा एम्बुलेन्स हल्लिरहेको पाइयो, स्थानीयले प्रहरी बोलाएपछि देखियो यस्तो लाजमर्दो दृश्य
Nextयिनै हुन् कपडा सुकाउँदै गर्दा ३ तले घरको छतबाट लडेर सधैंका लागि संसार छाडेकी गीता !
दुर्घटनामा परेर विगत तीन वर्षदेखि ओछ्यान परेकी अभिनेत्री निशा घिमिरेको उपचार नर्भिकले अस्पतालले निःशुल्क गर्ने
माधव नेपालले स्पष्ट भने, ‘सार्वभौमसत्ता पैसा र अनुदानमा बेच्दैनौं, एमसीसी चाहिँदैन’ त्यसपछि फातिमाले के दिइन् जवाफ?
हेटौंडामा घट्यो अनौठो घट्ना, पुरुषलाई नै ….